Ny Samsung Galaxy Tab S4 dia misy ao Espana | Vaovao momba ny gadget
Ignacio Sala | | About us, takela-bato
Amin'izao fotoana izao, eny an-tsena no hany vahaolana matotra, na kalitao hiantsoana azy amin'ny fomba hafa, eo amin'ny tsenan'ny takelaka dia atolotry ny Apple sy Samsung. Tamin'ny fiandohan'ny volana Aogositra dia nanolotra ny taranaka fahefatra an'ny Galaxy Tab S ny orinasa Koreana, karazana takelaka iray natokana ho an'ireo mpampiasa izay te-hahazo tombony betsaka amin'ity karazana fitaovana ity.
Ity taranaka vaovao ity, toy ireo teo aloha ihany, dia misy fenitra miaraka amin'ny S Pen, izay ahafahantsika manitatra ny fahafaha-manolotra aroson'ity fitaovana ity, fitaovana iray, araka ny nambaran'ny orinasa, fa azo amidy any Espana izao manomboka amin'ny 699 euro.
1 Famaritana ny Galaxy Tab S4
2 Vidin'ny Galaxy Tab S4
3 Solosaina amin'ny iPad Pro?
Famaritana ny Galaxy Tab S4
Ny Samsung Galaxy Tab S4 vaovao dia manome antsika efijery 10,5-inch misy vahaolana 2k sy endrika 16:10. Ao anatiny no ahitantsika ny processeur Qualcomm Snapdragon 835 miaraka RAM 4 GB. Tena manaitra ny orinasa Koreana tsy niloka tamin'ny Qualcomm's 845, saingy mety natao mba hampihenana ny vidin'ny fanamboarana ity fitaovana ity mba hifaninana amin'ny Apple iPad Pro.
Raha ny fitehirizana, ny taranaka fahefatra an'ny Tab Samsung S Manolotra fitehirizana 64 GB ho antsika, toerana ahafahantsika manitatra amin'ny fampiasana karatra microSD. Ao aoriana dia mahita fakan-tsary 13 mpx isika raha mahatratra 8 mpx ny eo aloha. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana, ity taranaka vaovao ity dia nanaparitaka ny sensor sensor an'ny dian-tànana, nanampy scanner iris kosa.
Ny tanjaky ny bateria dia 7.300 mAh, bateria azontsika ampidirina amin'ny alàlan'ny fifandraisana USB-C. Ety ivelany, ary tahaka ny taranaka teo aloha, hitantsika Mpandahateny sonia 4 AKG, izay ahafahantsika mankafy ny filma feno. Raha te hampiasa fitendry isika dia manolotra kitendry sy totozy ho antsika i Samsung, izay rehefa miaraka, ny takelaka dia mampandeha ny maody DeX, mamadika ilay takelaka ho solosaina finday.
Vidin'ny Galaxy Tab S4
Samsung Galaxy Tab S4 Tsy misy afa-tsy amin'ny kinova roa: Wifi sy Wifi + 4G, samy manana kapila mitahiry 64 GB, toerana ahafahanay manitatra araka ny nolazaiko etsy ambony. Ho fanampin'izany, azontsika atao koa ny mahazo azy amin'ny loko mainty na fotsy.
Solosaina amin'ny iPad Pro?
Toy ny fitsipika ankapobeny, ireo mpampiasa izay mahatoky amin'i Apple dia hisafidy ny iPad Pro, na dia tsy mifanaraka amin'ny Apple Pencil aza, Apple Pencil izay lafo mihoatra ny 100 euro. Raha manana iPhone ianao ary ny fampidirana atolotry ny Apple anao amin'ny vokatrao rehetra dia tsy sanda fanampiny hisafidianana ireo maodely Pro omen'ny Apple antsika, Safidy faran'izay tsara ny Galaxy Tab S4, satria mampiditra ny stylus koa izy io nefa tsy mila mandany vola bebe kokoa hahazoana izany.
Ankoatr'izay, rehefa mampifandray ny kitendry sy totozy Samsung ofisialy dia manova ny interface ho an'ny birao iray izy ireo, izay ampiana mpampiasa maro afaka manisa rehefa manombatombana izay fitaovana hovidiana, satria mamela antsika hifandray amin'ny totozy ihany koa, toy ny hoe solosaina finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » takela-bato » Ny Samsung Galaxy Tab S4 dia misy any Espana izao
Sonos dia manolotra New Sonos Amp, 125W isaky ny fantsona